डिसेम्बर 2, 2018 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments जण्डिस, डा. राम बहादुर बोहरा
कमलपित्त या जण्डिस कलेजोमा र पित्तमा लाग्ने रोग हो । सामान्य बोलिचालिको भाषामा यसलाई पँहेले रोग पनि भन्ने गरिन्छ । रगतका कण नष्ट हुने हुदाँ रगतमा बिलुरुबिनको मात्रा बढी देखिन्छ । यो रोग लागेपछि सावधानी अपनाइएन भने ज्यानै जाने खतरा समेत हुने डाक्टरले बताएका छन् ।
खाना पचाउन सहयोग गर्ने कलेजोमा अस्वस्थ्यकर खानपान र अत्याधिक मद्यपानकका कारणले जण्डिस हुन सक्ने डाक्टर बताउँछन् । विषेश गरी सरुवा हेपाटाइटिस वा पित्तथैलीबाट पित्त उम्लिएर कलेजोमा खस्नाले यो रोग लाग्ने गर्दछ । जसका कारण कलेजो सुन्निनुका साथै शरीरको सम्पूर्ण भाग पहेँलो हुने गर्छ ।
कलेजो समबन्धी रोगमा जण्डिस लक्षणको रुपमा देखिन्छ । प्यान्क्रियाज ग्रन्थीको क्यान्सरमा, कलेजोको रोग बाहेक केही रगतको रोगमा, पित्तको नलीमा पत्थरी भएमा, पित्त–नलीको क्यान्सर भएमा पनि जण्डिस हुन सक्छ ।
१. लिभ टि यो औषधि होम्योपैथीक औषधि पसलमा पाइन्छ ।
मात्रा : २ चमच औषधि दिनमा ३ पटक खाने ।
नोट: कुनैपनि औषधि उपचारबाट यो रोग निको नभएमा ९८५७०४०२९८ मा सम्पर्क राख्नुहोला ।
← नेत्रज्योति र स्मरणशक्ति बढाउन
यस्तो छ हातमा हुने राजयोगलाई पनि नाश गर्न सक्ने अशुभ ‘निशान’ →
नोभेम्बर 6, 2018 साइन्स इन्फोटेक 2